३ श्रावण २०७६
नेपालमा २०३० सालदेखि सामुदायिक प्रहरीको अवधारणा लागु भएको हो । अहिले समुदाय–प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम आएको छ । देशभरका स्थानीय तहसँग सम्झौता (एमओयु) गरेर सामाजिक र कानुनी सुरक्षा, सुरक्षा चेतनाको विकास र सजगतामा प्रहरी र नागरिकबीच सहकार्य गर्ने अवधारणासहित यो कार्यक्रम ल्याइएको हो । नागरिक साझेदारी र सामुदायिकको अर्थ एउटै हो । सामुदायिक प्रहरी देशका प्रत्येक वडा तहसम्म विस्तार भइसकेको छ । प्रत्येक युनिट तैनाथ हुने… विस्तृत समाचार
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कमाण्ड पूर्वगृहसचिव नवीन घिमिरेले सम्हालेसँगै केही भ्रष्ट कर्मचारीको नीदहराम भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हुन्– राजश्व समूहका वीरेन्द्र पाण्डे, भन्सार अधिकृत दयानन्द केसीलगायत । यसअघि भन्सार कार्यालयमा सरुवा भएर जान कर्मचारी मरिहत्ते गर्थे तर अहिले भागाभाग छ । जस्तो ः वीरेन्द्रदेव पाण्डे, जो ०५६ सालमा गाविस सचिव, बीचमा नासुको रूपमा अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गरे । दुई वर्षपछि तातोपानी भन्सार कार्यालयतिर… विस्तृत समाचार
१५ अषाढ २०७६
अनुगमनको नाममा कमाई धन्दा चलाएको जानकारी आउन थालेपछि मन्त्री मातृका यादवले उपभोक्ता हकहित संरक्षण विभागको टोलीसँगै जाने उपभोक्तावादीहरुलाई प्रतिबन्ध लगाइदिएका थिए । तर महिनौंको भनसुनपश्चात् विभागले आवश्यक ठानेको खण्डमा समावेश गर्न सक्ने सहमति दिइयो । तैपनि उनीहरु सुध्रिएको अनुभूति छैन । अस्ति हकहित संरक्षण विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनको कक्षमा कर्मचारीहरुबीच उपभोक्ताको धन्दाबारे चर्चा चलेको थियो । दुई जना कर्मचारी भन्दै थिए, ‘हाम्रो टोलीसँग जाँदा पनि… विस्तृत समाचार
२५ जेठ २०७६
जसरी टुप्पीवाल अजेयराज सुमार्गीको सम्पत्तिको स्रोत देखिँदैन, ठीक उही ढंगले दिन दुई गुणा रात चौगुणा व्यापारको साम्राज्य बिस्तार गर्दैछन् एक व्यक्ति । भाइ नक्कली सामान कारोवारी, दाइको कांग्रेसका प्रभावशाली नेतासँग उठबस । यस्तो कनेक्सन भएपछि अनुज र अनिल रुंगटाको दादागिरीको सीमा छैन् । नक्कली सामान बेचेर व्यापारिक साम्राज्य खडा गर्न सफल यी दाजुभाइको लगानी काठमाडौंदेखि वीरगञ्ज र विराटनगरसम्म फैलिएको छ । काठमाडौंमा जगदम्बा इन्टरप्राइजेज, वीरगञ्जमा… विस्तृत समाचार
१६ जेठ २०७६
सेनाको सल्लाघारी स्कुलबारे गतांकमा पत्र प्रकाशन भएपछि जेठ ११ गते शनिबार बिहान ९ बजे सबै अभिभावकलाई बोलाएर अन्तक्र्रिया गरिएको छ । उता छाउनीस्थित सैनिक अस्पतालमा त्यस्तै बेथिति छ । दरबन्दी करिब १३ सय जनाको छ तर कुनै पनि विभागमा समयमा काम हुँदैन । बिरामीको चाप बढी छ तर ओपिडीमा डाक्टर ढिलो आउँछन् अनि छिट्टै निस्केर क्लिनिकतिर पस्छन् । बिरामीलाई सेवा दिने उपकरणहरु जस्तै लिथ्रोट्रिप्सी, एमआरआई,… विस्तृत समाचार
जनआस्था साप्ताहिकको वर्ष २५,अंक ११,जेठ ८ गते बुधबारको अंकमा ‘विदेशबाट अपराधीहरुको बाढी’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूका प्रेस सल्लाहकार डा।कुन्दन अर्यालले १० गते,शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी समाचारको खण्डन गर्नुभएको छ । डा.अर्यालले प्रकाशित गर्नुभएको विज्ञप्तिप्रति जनआस्था सम्पादकीय समूहको ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त समाचारमा नेटवर्किङ व्यवसायको आवरणमा अन्तर्राष्ट्रिय आपराधिक सञ्जालले नेपालबाट आर्थिक परिचालनको काम गरिरहेको र त्यस काममा संलग्न व्यक्तिहरुलाई महानगरीय अपराध… विस्तृत समाचार
‘पत्रकारिता शुरु गरेको ३ दशक भयो, फल खानेमा अरूलाई सिफारिस गर्दै ठिक्क छ, अरू प्रदेश अनि संघका मन्त्री भए, कति त प्रधानमन्त्रीको प्रेस सल्लाहकार भए तर आफूचाहिँ मेयरको ड्युटीम सीमित हुने, के ताल हो भाइ तिम्रो ? न घरबासको ठेगान छ न सम्पत्ति कमायौ, किन व्यर्थ पत्रकारितामा बंैस गुमायौ ?’ एकाबिहानै शुभचिन्तक रामप्रसाद दाजुको गन्थनले मन एकतमासको भयो । उहाँले मसँग र मपछि पत्रकारिता गरेका… विस्तृत समाचार
​सरकारीमै यस्तो सिण्डिकेट
भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित सैनिक स्कुलले शिक्षा विकासमा राम्रो भूमिका निभाएकै हो तर अहिले कक्षा ७, ८ र ९ मा आधाभन्दा बढी विद्यार्थीलाई गणित, विज्ञान र सामाजिक विषयमा पुनः परीक्षा लिएर पास गराउनुप¥यो । शिक्षकले न कहिल्यै होमवर्क दिन्छन्, न कुन विद्यार्थीको पढाइ कस्तो छ भनेर चासो राख्छन् । दिउँसो पढाएपछि शिक्षकको काम सकिन्छ र ? बिहान–बेलुका ट्युसन दिनु पर्दैन ? बेला–बेला छड्के जाँच लिइरहनु पर्दैन ?… विस्तृत समाचार
​क्षमता होस् त यस्तो होस्
हेलिकप्टर दुर्घटनामा पर्नु एक महिनाअघि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी चन्द्रगढी विमानस्थल निरीक्षण गर्न पुगेका थिए । सर्ट–पाइन्टमा ठाँटिएकी क्यामेरावाल एक महिला सँगै अवतरण गरिन् । मन्त्रीले केही पर्यटकीय स्थान घुम्न भ्याए । सँगै थिइन् उनी । बिर्तामोडको होटल हेभनमा मन्त्री अधिकारीको पत्रकार सम्मेलन थियो । उनी त्यहाँ पनि सँगै पुगिन् । झापाली पत्रकारसँग उनलाई चिनजान गराउन अघि सरे नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष । त्यसयता कृतु भण्डारी निरन्तर… विस्तृत समाचार
एकाध वर्षअगाडिसम्म ललितपुर, कुमारीपाटीमा काष्ठमण्डप नामक कम्प्युटर पसल चलाएर बस्ने मान्छे आज एकाएक नेपालका दिग्गज दिग्गज नेतालाई विदेश घुमाउने, औषधी उपचारको खर्च तिरिदिने, तिनका नातापातालाई ठाउँठाउँमा घरको व्यवस्थापन गरिदिनेअवस्थामा पुगेको सुन्दा आश्चर्य लाग्छ । राजाका पालामा पेट रोगसम्बन्धी चल्तापुर्जा चिकित्सक थिए, आइएल आचार्य । उनका दुई छोरा छन्, सतिशलाल र सचिनलाल । ०६३ सालमा कृष्णबहादुर महरा सञ्चारमन्त्री हुँदा यिनीहरुले स्मार्ट मोबाइलको लाइसेन्स फुत्काए । अहिले… विस्तृत समाचार